> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si Canon EOS 7D Digital Igwefoto
Ẹkeme Naghachi ehichapụ Photos si Canon EOS 7D?
Hi niile, M mmadụ na mberede wepụrụ banyere 400 foto ndị si na kaadị ebe nchekwa na m igwefoto dijitalụ. Ndị na foto e n'oge m agbamakwụkwọ. Ugbu a, m mkpa onye na-agwa m ihe m nwere ike inwe m ehichapụ foto azụ. M na-eji a Canon EOS 7D. Biko eme nyere m aka! Ekele.
N'ezie, na-ehichapụ foto na-kpam kpam wepụrụ gị igwefoto. Ha ga-apụ n'anya na-adịgide adịgide nanị mgbe ha na-overwritten site ọhụrụ data. Nke a pụtara na gị nwere ike omume naghachi foto site na Canon EOS 7D na a foto mgbake ngwa. Mgbe ihu nke a nke, ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịkwụsị na-ewere gị Canon EOS 7D ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa maka ihe ọ bụla were.
I nwere ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọọ nlezianya na Internet. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ otu n'ime ihe ndị kasị trustful otu n'ime ha. Nke a dị ike ngwá ọrụ na-enyere gị iji naghachi photos furu efu nile di iche iche nke ndapụta, dị ka nhichapụ, igwefoto formatting, ma ọ bụ ọbụna ire ure. E wezụga, ị ga-enwe mgbe nile ike iji weghachite vidiyo na ọdịyo faịlụ site na gị Canon EOS 7D igwefoto na a usoro kwa. Ọ bụ ya mere ike ma dị mfe na-eji na photos furu efu gị Canon EOS 7D ga-eweghachi-enweghị ihe mgbu.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery na-amalite Canon EOS 7D foto mgbake ugbu a!
Naghachi Photos si Canon EOS 7D na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Ị mkpa jikọọ gị Canon EOS 7D ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị na-agbake furu efu photos. Ugbu a ka na-amalite mgbake na Windows version nke Wondershare Photo Recovery.
Nzọụkwụ 1 Wụnye na-agba ọsọ Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị. Ị pụrụ ịhụ niile na-akwado ngwaọrụ na ya mmalite window.
Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na-amalite Canon EOS 7D foto mgbake.
Nzọụkwụ 2 Ugbu a, ị nwere ike họrọ mbanye n'ihi na gị Canon EOS 7D ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na window. Wee pịa "iṅomi" ka usoro ihe omume ike iṅomi furu efu foto site na ya.
Nzọụkwụ 3 Mgbe scanning okokụre, ị ga-enwe ike preview hụrụ oyiyi site na-ahọpụta "Photo" na kọlụm na-ekpe nke window.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nye akara photos ị na-aga naputa site na gị Canon EOS 7D igwefoto na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: The Natara photos-apụghị nọ gị Canon EOS 7D igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa n'oge mgbake, ma ha nwere ike overwritten na mgbake nwere ike ada.